VaZuma Votsvaga Rutsigiro rweVamwe Vatungamiri veAfrica
Mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vari kutarisirwa kuita misangano yakakosha panyaya yeZimbabwe kumucheto wemusangano weAfrican Union kuAddis Ababa vaine chinangwa chekuti vatungamiri vemuAfrica vayambire mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti vasakurumidze kuita sarudzo zvinozopa kuti munyika muitezve bopoto.
VaZuma, vanove mutongi gava panyaya yeZimbabwe, nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica, vanoti vari kuda kuti zvinhu zvakawanda zvakafanana nemitemo yesarudzo, kutorwa kwenhau, uye gwaro revavhoti ritange ravandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa.
Asi VaMugabe neZanu-PF vari kusimbirira kuti vari kuda kuti sarudzo dziitwe nechimbichimbi vachiti nyaya yekuedza kuvandudza zvinhu iri kunonoka. Zanu-PF inonzi yatotanga kutsvaga rutsigiro.
VaMugabe vanoti vane simba rekumisa kushanda kweparamende vodaidzira sarudzo. Chipangamazano chaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vanoti ichokwadi kuti VaZuma vachataura nezveZimbabwe kumucheto wemusangano weAU. VaZuma naVaMugabe vari kutarisirwa kumusangano weAU neMugovera.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaNelson Chamisa, vanoti bato ravo ranyorawo tsamba kuna VaZuma richiti hairisi kuzotambira nyaya yesarudzo kana zvinhu zvisina kuvandudzwa, kunyanya gwaro revavhoti.